LA Noire dia ho tonga remaster amin'ny konsily farany | Vaovao momba ny gadget
Nintendo Switch dia tsy isalasalana fa ny console ho an'ny remastering mahaliana hanomboka hanomboka, tsy izaho no hitaraina, satria ny roa amin'ireo lalao nankafiziko indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy dia ny fanontana "HD" an'ny kilasika taloha. Na izany aza, Nintendo Switch dia manana hery somary voafehy izay afaka mampitombo ny katalaogin'ity karazana lalao ity mba tsy hahavery ny kalitao ao amin'ny tranomboky. Ny tokony horesahina anio dia LA Noire, ity kilasika mahafinaritra ity dia mety hahatratra ny taranaka farany konsol amin'ny alàlan'ny varavarana lehibe ary miaraka amin'ny vidiny izay manintona ny gamer.
Efa Lalao lalao izay nitsambikina tao anaty dobo niaraka tamin'ity raharaha ity, nanambara tao amin'ny kaonty Twitter-ny fa ity ranon'i Ekipa Bondi tonga amin'ny PlayStation 4, Xbox One ary Nintendo Switch amin'ity fahavaratra ity, noho izany dia hifanojo eo afovoan'ny fampielezan-kevitry ny FIFA, Call of Duty ary ireo lalao mahazatra isan-taona. Na izany aza, nanapa-kevitra ny hangina momba izany ny mpanonta ny lalao, Rockstar.
Raha tsy miresaka izy ireo, Tsy ho gaga mihitsy izahay raha afaka mampidina an'ity lalao ity amin'ny fivarotana nomerika isaky ny orinasa, satria io fantsom-bato Rockstar io ihany miaraka amina faritra marobe ao amin'ny PlayStation Store, izay ahafahantsika milalao Grand Theft Auto III, tsy latsa-danja.
Ity dia sakafo kely mety ho an'ny Red Dead Redemption 2 izay resahina betsaka. Ny ekipa Rockstar dia manohy miasa amin'ny boatin-tanin'izy ireo miaraka amin'ny script mahavariana sy mahatsikaiky, ary faly izahay. Tena mbola tsy nitranga ela toy izany LA Noire dia tonga tamin'ny 2011, Enin-taona monja no mijery ny jery todika, na izany aza, ohatrinona ny teknolojia niova tao anatin'ny fotoana fohy, tamin'izany fotoana izany dia nampiasa finday avo lenta 3,5-inch.
Milalao LA Noire ve ianao tamin'ny androny? Te-hilalao azy io indray ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » LA Noire dia ho tonga remaster amin'ny konsily farany
PlayStation 4.50 firmware 4 dia miteraka olana amin'ny tamba-jotra